ကောင်းကင်ဖြူ: ရိုးရှင်းတဲ့ သက်ရှိ လူသား
ရိုးရှင်းတဲ့ သက်ရှိ လူသား
လှံစိုက်ရာမြေနိမ့် …. ဆိုရမလား မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်လို့ပြောရမလား… ။ လှံလာစိုက်လို့မြေ နိမ့်သွားတာလား … ။ မြေနိမ့် လို့လှံ လာစိုက် တာလား … ကျနော် မသိပါ ။ ကျနော် တို့ နှစ်တွေ တော်တော်ကြာ မရှိအတူရှိအတူ နေ့ ရက်တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတယ် ။ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ကုသိုလ်များများ မလုပ်ဖြစ်ပင်မဲ့ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်းပါတယ် ။ မမြဲခြင်းတရားဆိုတာ သိပင်မဲ့ ဘယ်လိုမှ ဖြေမရ ပါ ။ ဒီနေ့ည ၆နာရီ ၁၅မိနစ်လောက်အချိန်မှာ သူမျက်လုံးကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြီးပြီ ဆိုတာသတင်းကြားတော့ စိတ်ထဲမှာ အရာရာငြိမ်သက် သွားသလို ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာလည်း မေးခွန်းပေါင်းများစွာပေါ့ ။
လူဘဝ ဆိုတာရိုးရိုးလေးပါ .. ။ ဘာကြောင့်များ ရှုပ်ယှက်ခက်နေတာ လည်း ကျနော် မတွေးတက်တော့ဘူး ။ ကျနော်ပဲ အတွေးလွန်နေသည်လော … ။ လူ အချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆို တာ မရှိဘူးလို့ကျနော် အခုထိ မယုံနိုင်သေးဘူး ။ ရင်ထဲမှာ မေးခွန်းတွေအတွက် ကျနော် အိပ့်မပျော်နိုင်သေးပါ … ။ လက်တွေ့ ဘဝကြီးက ကျနော် သိခဲ့တာတွေနဲ့တော်တော်လွဲနေပါတယ် ။ ကျနော် ဟာ အမှန်မဟုတ်တာတွေ ကို သင်ယူခဲ့မိတာများလား … ။
မနေ့ညနေ ၄နာရီခွဲတိတိမှာ မတော်တဆဖြစ်ပါတယ် … ။ အရေးပေါ်အခြေနေနဲ့ဆေးရုံကို ၅ နာရီလောက်ရောက်ပါတယ် ။ တာဝန်ကျဆရာဝန်က အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မို့လိုအပ်တယ်လို့မှတ်ချက်ရေးထားပင်မဲ့ ။ ၂၄ နာရီ ကြာစောင့်ရပြီ ယနေ့ ညနေ ၅နာရီ ထိုးလောက်မှ ခွဲစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ။ ၆နာရီ ၁၅ မှာတော့ ခွဲစိတ်မူ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ် ။ မျက်လုံးတစ်ဖက်တော့ ဆုံးရှုံးသွားပင်မဲ့ ကျန်တစ်ဖက်ကိုတော့ ဘာမှ မထိခိုက်တော့ပါဘူး ။ ခွဲစိတ်မို့စောင့်ရတဲ့ ၂၄ နာရီ အတွင်း လူတွေ ကို ကျနော် တော်တော် ကြောက်သွားမိပါတယ် ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆို တာ သူတို့ ဆီမှာ မရှိပါဘူး ။ သေရေးရှင်ရေ အခြေနေမှာတောင် ကိုယ့်အတွက် အမြတ်ထုတ်ချင်ကြတဲ့ လူတွေ ။ ကြားရတဲ့ နားတွေ မြင်ရတဲ့ အပြုအမှုတွေ မယုံနိုင်အောင်ပါပဲ ။
တစ်မိုးအောင်မှာ အသက်ရှင် ကြတာချင်းတူတူ IC ဆိုတာရှိမှ လူလို့သတ်မှတ်မည်လော ။ ဥပဒေ ဆိုတာက လူတစ်ယော်ရဲ့ အသက် ထက်အရေးကြီးနေတာလား ။
ကျနော် ဟာ ဥပဒေ ပညာကို ကျေကျေနပ်နပ်စိတ်ဝင်တစားသင်ယူခဲ့ ဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ ဥပဒေဆိုတာ ကျနော် တို့လူသားတွေ ရဲ့ ဘဝ အတွက် လုံခြုံမှု နဲ့သာတူညီမျှ ဖြစ်စေမှု ကို ဖော်ဆောင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားသလို အဲ့လို ဖြစ်စေတယ်လိုပဲ သင်ယူခဲ့ရတာပါ ။ အခုလက်တွေ့ ဘဝကြီးမှာတော့ ကျနော် သိတာတွေ မှားကုန်ပါပြီ ။ ကျနော်က အမှားတွေကိုပဲ အသင်ယူမိခဲ့တာလား .... ။ လူတစ်ယောက် သေရေးရှင်ရေးမှာ ဥပဒေ က ပထမ လူအသက်က ဒုတိယ နေရာ မှာနေခဲ့ရပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော် တို့ က အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားဖြစ်နေလို့ ပါ … တဲ့ ။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်တော့မယ် လူဘဝကြီးထဲမှာ ရှင်သန်ခဲ့ရတာ အခုမှ ကိုယ့်ကိုယ် အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစား ဖြစ်နေပါလားလို့တွေးမိတာ ကျနော် တော်တော်လေး ညံ့လွန်းတယ်လို့အရှက်ရမိပါတယ် ။
လူ … အချင်းချင်း အုပ်ချုပ်သူ နဲ့ အုပ်ချုပ်ခံ ဆိုတာ ရှိနေသမျှတော့ သာတူညီမျှဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ရွှေချထားပါစေ … သွေးတွေ စွန်းနေအုံးမည် ။ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့၊ တစ်စုံတစ်ယောက် ၊ တစ်စုံတစ်ဦးက ပေးမှ ရတာ လူ့ အခွင့်အရေးတဲ့လား …. ။ ပေးမှရတာ အခွင့်အရေးတဲ့ ……. ။ ဒီလောက်နဲ့ တင် တော်တော် ရီစရာကောင်းနေပါပြီ ။ ဒါကို အားမရလို့လူ့ အခွင့်ရေး ဆိုပြီ ရွှေရောင်ခေါင်းစီးတွေနဲ့သဘာဝ တရားကြီးကို မှိုင်းတိုက်ခံနေရတာကို လက်ခုပ်တီးပေးရမည်လော …. ။
ပေးမှရတာ အခွင့်အရေး မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘယ်သူမှပေးစရာမလိုပါဘူး ။ သဘာဝလောကကြီးက ပေးပြီသာပါ ။ လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်တာ သဘာဝကပေးတဲ့ အခွင့်အရေးပါ ။ အသက်ရှင်ခွင့်ရအောင် ကာကွယ်ပေးတာမှ လူ့ အခွင့်ရေးဖော်ဆောင်တာပါ ။ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်စုံတစ်ဦးက အသက်ရှင်ခွင့် ပေးမှ ၊ အသက်ရှင်မို့ခွင့်တောင်းမှ ရတာကို လူ့ အခွင့်ရေးလို့ဆိုချင်ကြတာလား ..... ။
ကျနော် တို့ရှင်သန်မို့ အတွက် စိတ်မပါတဲ့ ပါတီ ဆိုတာ ဝင်ရမှာလား ... ။ နေရင်းထိုင်ရင်းဒုက္ခသည် လုပ်ရမှာလား ... ။ ရှင်သန်မှုအတွက် သနားခံ ခိုလုံခွင့်တောင်းရမှာလား ။ နိုင်ငံသား ၊ နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်တည်မှု က သေရေးရှင်ရေးထက်အရေးကြီးနေတာလား .. ။ ပညာတက် ၊ ပညာရှင်များရဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတာရယ် လှု့ အခွင့်ရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေအောက်မှာ ကျနော် တို့ဘဝတွေ လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့နေတာ ဘယ်သူသိနိုင်မှာ .... လည်းဗျာ ..။
တစ်ကယ်တော့ ကျနော် တို့ ဆိုတာ သဘာဝ လောကကြီးထဲက ဘာမှ မထူးဆန်း တဲ့ လူသားတွေပါပဲ ။ ဒုက္ခသည်လည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ ခိုလုံတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံခြားသားလည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ အရမ်း …. အရမ်း …. ကို ရိုးရှင်းတဲ့ သက်ရှိ လူသား …… တွေပါ …။
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:08 AM
Labels: ဝမ်းနည်းခဲ့ရသော နေ့ ရက်များ
စံပယ်ချို March 12, 2013 at 11:51 PM
တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်သွားတဲ့သူအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မောင်ဘုန်းရေ
ကိုဘုန်းလို တော့ အကွက်ကျကျမပြောတက်ဘူး... ။ ဘဝတူတွေမို့ လို့ထပ်တူ ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားမိပါတယ် ... ။
Kဇင် ..... ။
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) March 13, 2013 at 5:42 AM
ဒီ ဒေသ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ
နာကျင်ခဲ့ရတာတွေလည်း များနေပါပြီ ကိုဘုန်းရာ။
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 13, 2013 at 7:18 AM
ပထမပို့စ် ကတည်းက ညလေးမှာ
တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ခံစားနေရ
လူတိုင်းကို မဆိုလိုပေမဲ့ အများစုဟာ
ပတ်သက်လာရင် ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့
စိတ်ဓါတ်ကို ဘာလို့ အောက်ဆုံးအထိလွှင့်
ပစ်တတ်ကြတာလဲ မသိဘူးနော် :((((
Ma Tint March 13, 2013 at 11:37 PM
ရင်တွင်းလှိုင်းခတ်သံလေးတွေ ပီပြင်တယ် မောင်ဘုန်းရေ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်း အသက်ရှင်ခွင့်ကို သဘာဝကြီးကပေးဆောင်ထားပြီး ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးမှသာ လူ့အခွင့်အရေးဖေါ်ဆောင်တာ... ထိထိမိမိ စာသားလေးတွေပါ။
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) March 16, 2013 at 12:53 AM
ကိုယ့်သံရုံးကလည်း ဥပေက္ခာပြုခံဖူးတယ် နောက်ဆုံး အလုပ်အတူလုပ်ဖူးတဲ့ အိန္ဒယလေးက နောက်သုသာန်မှာ DPKLစည်ပင်ကျင်းတူးပြောင်းလုပ်တော့ မြန်မာအလောင်းတွေ တာဝန်ယူသူမရှိတာများတယ်လို့တောင် ဆုံတှိုင်းပြောပြရှာတယ်
blackroze March 16, 2013 at 11:04 AM
ကျမတို့တွေ တနေ့တော့ သူများနိုင်ငံမှာ ကျွန်လုပ်နေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မှာပါ
အနှိပ်ခံဘဝတခုကို ကြံကြံခံနိုင်အောင် ကြိုးစားနေရတဲ့အနေအထားတွေ
ရိုးမြေကျ March 19, 2013 at 11:22 PM
ရိုးရှင်းတဲ့ သက်ရှိ လူသားဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောကကြီးကလဲ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်တတ်ကြတာ သဘာဝလိုဖြစ်နေပြီလေ။
ထာဝရမြဲ ကြပါစေ ... ။
ရွှေလို့ခေါ်ကြတဲ့ ကျနော် တို့မြန်မာပေါ့ဗျာ